Rosia :Mifantoka Amin’ny Fanafihana Manaraka Atao Amin’ny Fahalalahan’ny Asa Fanaovan-Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2016 3:15 GMT
Ao anatin'ny korontana ny masivohom-baovao RBC. Sary nataon'i Kevin Rothrock.
Misy olona te-hampino mafy ny vahoaka any Rosia fa mivonona ny hivarotra ny anjarany goavana anankiroa : ny orinasa mpamokatra angovo Quadra sy ny vondrona mpitrandraka haino aman-jery RBC ilay mpanefoefo Rosiana Mikhail Prokhrov. Vao mainka nihamafy ilay tsaho efa an-taonany maro, hany ka tsy nanana fotoana handàvana ilay honohono niseho farany akory ny vondrom-pampiasàm-bolan'i Prokhrov, Onexim, nialohan'ny nisehoan'ny lahatsoratra lava mahakasika izany tao amin'ny Gazeta.ru, nitondra ny lohateny hoe “Prokhorov Selling Off Assets” ( Mivarotra ny anjarany i Prokhrov) tamin'ny 24 Aprily.
Nanana olana i Mikhail Prokhorov, izay nanao fampielezan-kevitra somary mihaja noho ny an'i Vladmir Putin tamin'ny fifidianana ho filoha tamin'ny 2012, tamin'ity volana ity. Ny 11 Aprily, nandefa ampaham-pandaharana roa momba ny Onexim ny tambajotranà fahitalavitra REN-TV : ny iray miampanga ny Quandra ho nanabontsina ny vidin'ny trano sy ny kojakoja ilaina tany an-tanànan'i Lipetsk, ary ilay iray hafa manamafy fa manafina ny harenany amin'ny kaonty any ivelan'ny firenena i Prokhorov. Telo andro taty aoriana, ( ny andro izay nitenenan'i Vladmir Putin ho an'ny firenena tao amin'ny fahitalavitra nandritra ny 3 ora sy sasany omena azy amin'ny fandaharana “Fanontaniana&Valiny), nanaovan'ny mpitandro filaminana federaly bemidina ny ankamaroan'ny biraon'ny orinasan'i Prokhorov, isan'izany ny biraon'ny Onexim any Mosko. Taty aoriana, nolazain'ny mpitondra tenin'ny governemanta fa ampahany iray hafa amin'ny fanadihadiana ilay fisavàna, na dia nihevitra aza ireo manampahefana fa nahita porofo hahitàna ny fandosirana hetra ataon'ny Onexim nandritra ilay fisavàna.
Avy hatrany, taorian'ilay bemidina dia notanisain'ny fahitalavitra Dozhd taminà tatitra avy aminà loharanom-baovao roa avy amin'ny olona tsy mitonona anarana ao amin'ny RBC, manamafy fa ampahany amin'ny fanentanana manery an'i Prokhorov hivarotra ny orinasam-baovaony, ny RBC ilay fisavàna tao amin'ny biraon'ny Onexim. Mandritra izany fotoana izany, nambaran'ny gazety Kommersan fa nohazavain'ny loharanom-baovaony fa tahaka ny ezaka ataon'ny fitondrana mba hifehezana ny tondrozotra politikan'ny RBC ilay bemidina. Nolavin'ny mpitondra tenin'ny Kremlin, Dmitry Peskov (tamin'ny teny mahery) izany taty aoriana, tsy misy fifandraisana ny tondrozotra politikan'ny RBC, ny asa fanadihadiana ary ny governemanta.
Niharatsy ny raharaha ho an'i Prokhorov ny 21 Aprily teo, rehefa nozarain'ilay mpitoraka bilaogy tsy fantatra anarana antsoina hoe Vredina999 ny dikasarin'ilay lahatsoratra iray nivoaka tao amin'ny RBC momba ny olana miandry ny drafitr'asan'i Rosia amin'ny fivarotana petrabola any amin'ny orinasam-panjakana sasany mba hanentsenana ny fatiantoka amin'ny tetibola. Ohatra ny namoaka (tsy nahy) filazana iray nosoratan'ny iray amin'ireo lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny masoivohom-baovao nalefa ho an'ireo mpanao gazety miasa amin'io resaka io ilay sary nozarain'i Vredina999. Hita ao amin'ilay matoandahatsoratra, notenenina ireo mpanoratra mba hitady mpanao fanadihadiana afaka mitsikera ny Filoha Putin noho ny famerana izay orinasa afaka mividy petrabolanà orinasam-panjakana any Rosia. ( Ilay dika farany tamin'ny lahatsoratry ny RBC dia ahitàna fanehoankevitra lalina avy aminà mpahay toekarena ho amin'izay vokany izay indrindra)
Navoakan'ny RBC tsy nahy ilay resaka tsy mbola vita hatramin'ny farany, isan'izany ilay matoandahatsoratra somary mahasadaikatra. Sary : Ruposters.ru
Ny ampitso, nanomboka nampifamahofaho ilay zavatra hitan'i Vredina999, rehefa notsongain'ny tranonkalam-baovao mpomba an'i Kremlin, Ruposter ( izay tantanan'i Stanislav Apetyan mpiasa taloha tao amin'ny Kremlin fahiny). Nofaritan'ny Ruposter ao amin'ny tatitra nataony fa tahaka ny torolàlana amin'ny fitadiavana ” fihevitra marina” ilay matoandahatsoratry ny RBC. Novalian'i Egor Timofeev mpitondra tenin'ny RBC fa ilay matoandahatsoratra tafaporitsaka dia resaka matoandahatsoratra fotsiny ihany, fa tsy isan'ny ezaka ratsy mba hampidirana fotokevitra ao amin'ny tantaran'ilay masoivoho.
Nitebiteby fatratra tamin'ilay tatitra tsy miankin'ny RBC ireo manampahefana ao Kremlin, araka ny voalazan'ny gazety Gazeta.ru, nanjary tezitra mafy tamin'ilay masoivohom-baovao ry zareo, hatramin'ny namoahany ny vaovao momba an'i Katerina Tikhonova, noheverina ho zanakavavin'i Putin, sy i Kirill Shamalov, heverina ho vadiny. ( Nanapaka hevitra ny tsy hamoaka ny rohiben'ireo tantara ireo ny RBC, angamba natahotra ny fifandraisana mivantana amin'ireo porofo.) Taorian'ireo tatitra roa ireo (Janoary 2015 sy Desambra 2015, araka ny filaharany) no namoahan'ny Reuters tantara mifantoka amin'ny fifandraisan'ireo olona ireo amin’ i Putin.
Ary koa, taorian'ny namoahana ilay antsoina hoe “Taratasin'i Panama”, dia namoaka pejy voalohany momba ilay resaka kaonty tsy ara-dalàna any ivelany ny gazety an-tsoratry ny RBC. Ny sarin'i Putin no sary asongadin'ilay tantara. ( Ho setrin'izany dia nampiasain'ny iray amin'ireo manampahaizana indrindra ao Rosia sady tena mpanohana fatratra an'i Kremlin, Dmitry Kiselyov, ny fandaharany amin'ny fahitalavitra tamin'ny 10 Aprily mba hilazàna ny RBC ho “Rosiana mpanampy” ny Amerikana mpanao fampielezankevitra. )
Asehon'i Dmitry Kiselyov ilay pejy voalohany mahabe adihevitry ny RBC. Sary: Tjournal.ru
Mandritra izany fotoana izany, ao amin'ny RBC, handeha hanao fialantsasatra sabatika lavabe i Elizveta Osetinskaya lehiben'ny tonian-dahatsoratr'ilay masoivohom-baovao sady mpitsara ireo fanapahankevitra politika goavana. Tany amin'ny fiandohan'ny volana Aprily, dia nambaran'ny RBC fa hifindra monina vetivety any amin'ny Oniversiten'i Stanford izy amin'ny Septambra. Herinandro vitsivitsy monja taty aoriana anefa dia fantatra fa ho alain'i Osetinskaya mialoha ( amin'ny volana May) ny andro fialany sasatra.
5 ora izayBelarosia